Izicelo ezisebenzisa izinsiza eziningi kudivayisi yakho ye-Android | Izindaba zamagajethi
Lezi yizinhlelo zokusebenza eziyi-10 ezisebenzisa izinsiza eziningi kudivayisi yakho ye-Android
Kuya ngokuya kujwayelekile kithi ukufaka inombolo enkulu yezicelo ku-smartphone yethu, ezinye zazo esingazisebenzisi nakanye. Azikho izinhlelo eziningi ezidla izinsiza eziningi kakhulu esigungwini sethu, kepha abambalwa badla izinsizakusebenza ezitholakalayo zedivayisi yethu yeselula, ngaphandle kokuthi sinake.
Abafana base-Avast benze ifayili le- ukutadisha okuthakazelisayo of the izinhlelo zokusebenza ezidla izinsiza eziningi esigungwini sethu nedivayisi ye-Android, futhi namuhla sithathe isinqumo sokuzincoma ukuze nonke nibheke i-smartphone yakho bese ubheka ukuthi zingaki zalezi zinhlelo zokusebenza ozifakile futhi ikakhulukazi yikuphi okufanele ube nakho, ngaphandle kokuzisebenzisa nganoma yisiphi isikhathi.
2 Spotify Umculo
5 Ukuthenga kwe-Amazon
8 Hlanza inkosi
Inethiwekhi yokuxhumana ethandwayo Snapchat Izimise njengohlelo lokusebenza oludla izinsizakusebenza eziningi esigungwini sethu ngohlelo lokusebenza lwe-Android, ngokuyinhloko ngoba ihlala isebenzisa ikhamera ukuthatha izithombe namavidiyo esiwashicilela ngemuva nje kwephrofayili yethu.
Noma ngabe uyisebenzisa ngokuqhubekayo noma cha, i-Snapchat kudla inani elikhulu lezinsizakusebenza futhi futhi kwenza ukukhipha okuphawulekayo kubhethri lakho, ngakho-ke yiqaphelisise futhi uyikhiphe uma ungayisebenzisi njalo.
Esikhundleni sesibili kungenye yalezi zicelo cishe sonke esizisebenzisayo ezimpilweni zethu zansuku zonke, njenge Spotify, futhi lokho kusinikeza ikhathalogi enkulu yomculo. Isevisi yomculo yokusakaza isebenzisa ibhetri enkulu, kodwa futhi nenkumbulo futhi ungayikhohlwa, nedatha yeselula ngoba ngaphandle kokuthi silande umculo wethu esiwuthandayo ngenketho ye-Premium, izosebenzisa idatha yesilinganiso sethu ngaso sonke isikhathi iselula.
Ngingacishe ngibe nesibindi sokukusho lokho ngokuqiniseka okuphelele lokho akuzwakali kakhulu I-Wattpad, kodwa kungenye yezicelo ezithandwa kakhulu ezinikezelwe kubabhali nakubafundi, lapho abokuqala bengabelana khona ngezindaba zabo, kuthi abokugcina bakuthande ukuzifunda nokuzikala, bengeza imibono.
Ngaphezu kwale misebenzi, I-Wattpad iyinto esondele kakhulu kunethiwekhi yokuxhumana nabantu, ngokusetshenziswa okuqhubekayo kwedatha nezinsizakusebenza ezivela esigungwini sethu. Azikho ezinye izinhlelo eziningi zalolu hlobo, kepha uma ungafuni ukubeka i-smartphone yakho onqenqemeni lwentaba, kuzodingeka ukuthi ubheke ukusetshenziswa kwayo kakhulu.
Kuyamangaza ukungaboni noma yiluphi uhlelo lokusebenza lwemiyalezo esheshayo kulolu hlu phakathi kwabathathu abadla izinsizakusebenza eziningi, kepha endaweni yesine esiyitholayo Line, ngaphezu kohlelo lokuthumela nokwamukela imiyalezo.
I-WhatsApp noma iTelegram ayiveli kulolu hlu, into ngokungangabazeki enhle kakhulu kubo bonke abasebenzisi balezi zinhlelo zokusebenza ezimbili, kepha uma ufake i-Line, kubonakala kucace ukuthi kufanele ubheke ukuthi kudla izinsiza zakho nebhethri lakho.
Kuyatholakala ukuthola ezikhundleni eziphezulu zalolu hlu uhlelo olufana nalolo Ukuthenga kwe-Amazon, okungabonakali ukuthi luhlobo oludinga izinsiza eziningi kakhulu ukuthi zisebenze. Kodwa-ke, ngenxa yokusebenzisa ngokweqile inethiwekhi, ingaba isitha sethu esibi kakhulu usuku nosuku. Vele, i-Amazon ingasikhipha ezinkingeni eziningi kunalokho engakukhiqiza.
Ukudlala ngothando nge-Intanethi kungasheshe kuqede ukubekezela kwakho, kodwa futhi, ngokwesibonelo, nebhethri ledivayisi yakho ephathekayo. Futhi yilokho Tinder, enye yezicelo ezithandwa kakhulu zohlobo lwayo, ingena endaweni yesithupha phakathi kwezinhlelo ezisebenzisa kakhulu izinsiza.
Su ukusetshenziswa ngokweqile kwebhethri, idatha kanye nokugcinwa (ngaphezu kokuqhubeka usebenza ngemuva ngaso sonke isikhathi) se-smartphone yethu sikubeka esimweni esibucayi.
Vele, lolu hlu alukwazanga ukuphuthelwa olunye lwezicelo eziningi esivumela ukuthi saziswe ngaso sonke isikhathi. SmartNews ingenye yalezo zicelo esivumela ukuthi sifunde izindaba ezivela kwinani elikhulu labezindaba nganoma yisiphi isikhathi noma indawo. Vele, intengo yokwaziswa iphezulu kakhulu futhi ukuthi lezi zinhlelo zokusebenza zidinga ukuvumelanisa inani elikhulu lemininingwane cishe nsuku zonke.
Isibonelo, isikhombimsebenzisi se-SmartNews asisizi ngezinga elikhulu ukunciphisa ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza nokuthi sigcwele ukugqwayiza nezinye izinto ezithinta ngqo ukuzimela kwedivayisi yethu. Ngenhlanhla lezi zinhlelo zokusebenza kulula ukuzisusa esigungwini sethu, futhi kwanele ukuvakashela amanye amakhasi e-web ukuze waziswe.
I-Master ehlanzekile ingenye yalezo izinhlelo zokusebenza ezinikelwa ukwenza ngcono ukusebenza okujwayelekile kwe-smartphone yakho, nokuthi ngokocwaningo olwenziwe yi-Avast luthola okuphambene nalokho. Futhi lolu hlelo lokusebenza ingenye izinsiza kakhulu kudivayisi yethu ye-Android, siphile isikhathi eside ironies!
Besihlale sikusho, kepha uma kwenzeka sikuphinda, ukusebenzisa lolu hlobo lohlelo lokusebenza ukuchitha isikhathi okuphelele futhi manje futhi kuyingozi yebhethri lethu noma imemori yethu ye-RAM.
Kubukeka kumangaza ukuthi ngenani elikhulu kakhulu lezinhlelo zokusebenza iGoogle enazo ku-Google Play, esisodwa kuphela esishelela kulolu hlu, into ekhuluma kahle kakhulu ngogqogqo lokusesha. Ama-Spreadsheet Kuyinto isicelo esivela endaweni yesishiyagalolunye, nokuthi ngaphandle kokuba lula kwayo kudla inani elikhulu lezinsizakusebenza.
Izizathu kunzima ukuzithola nokuthi ubulula ifulegi lazo, kepha sicabanga ukuthi uma ispredishithi sinzima, i-terminal izodinga izinsiza ezinkulu zokuyilayisha futhi isibonise njengoba kufanele.
Ukuvala lolu hlu sithola ifayela le- ukusetshenziswa kwesikhulumi saseBrithani iThe Guardian. Manje nguwe okufanele ukhethe uma ukhetha ukwaziswa noma kufanele ukhokhise ifoni yakho ephathekayo kaningi.
Zingaki zalezi zinhlelo zokusebenza ozifakile kudivayisi yakho yeselula ngohlelo lokusebenza lwe-Android?. Sitshele esikhaleni esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma ngenye yezingosi zokuxhumana nabantu esikhona kuzo, futhi usitshele uma ubona ukusetshenziswa ngokweqile kwezinsizakusebenza zanoma yimuphi wabo.
Imininingwane engaphezulu - blog.avast.com
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Lezi yizinhlelo zokusebenza eziyi-10 ezisebenzisa izinsiza eziningi kudivayisi yakho ye-Android
Abakwa-LG abalindi ukuthi i-MWC yethule uhlelo lwayo lwe-LG Watch Sport neWatch Style, izokwethulwa ngoLwesithathu
I-Tizen izobuyekezelwa enguqulweni engu-4.0 maphakathi nonyaka ka-2017